Salaamanews » Dastuurka Maser meel marintiisa muran baa ka dambeeya (warbixin)
Home » Maqaallo, Warar Dastuurka Maser meel marintiisa muran baa ka dambeeya (warbixin) Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 26th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
DHAWAAQII RASAASTA DHAWAAQ BAA BEDELAY! Qormo xiise gaar ah leh oo Muqdisho ku saabsan!Sidee baa loo soo xuli doonaa wasiirrada cusub?Xayiraadda hubka ee wali saaran Soomaaliya oo halis ku ah guulaha ammaan ee SoomaaliyaKooxda al-Shabaab oo weerarrada lala eeganayo dadka waxgalka ah ka wadda MuqdishoDaawo: Muuqaal iyo warbixin ku saabsan burburka iyo guuldarada ku dhacday garoomadii iyo kooxihii ciyaaraha Soomaaliya
(Salaamanews)-Taageerayaasha xisbiga walaaloowbay “Ikhwaanul-muslimiin” ayaa garab taagan madaxweynaha wadanka Maser, waxaana ay ayidsanyihiin in loo codeeyo dastuurka wadanka Maser, iyagoo u muuqda inay yihiin kuwa libinta dastuurka helay.
Kuwa ka soo horjeedo codeynta dastuurka ayaa sheegay in danaha dadka muslimiinta uun uu eegayo dastuurka la meelmarinayo ee uu yeelanayo wadankani Maser, taasoo dhaawaceysa dimuqraadiyad iyo wada noolaasho uu ku faanayo xisbiga madaxweyne Mursi.
Kooxaha siyaasad dhexaadka ah ee aan dhinacna la jirin ayaa ku baaqaya in laga shaqeeyo danaha dadka iyo dalka iyadoo meel fog leyska dhigayo qadiyadda ay dhici karto in lagu laabto gacan ka hadal hadii la sii huriyo colaadda socaneysa.
Hogaamiyaha xisbiga muslimiinta walaaloobay Maxamed Badiic ayaa ugu baaqay muslimiinta iyo dadka kale ee reer Maser inay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda, isagoo xusay hadii la mucaarido hogaamiye Mursi in laga dhaxli doono dagaal aan dhamaad laheyn.
“Dadka reer Maser waa inay billaabaan dib u dhiska dalkeenna, maanta waa maalinta aan dhalanay, oo kale waa maalin ay xor yihiin wiil, gebar, Muslim iyo gaal” ayuu yiri Maxamed oo ah hogaamiyaha xisbiga Ikhwaanka maser.
Dadka Masaarida ayaa 60% codkooda siiyay In la meel mariyo dastuurka dalka, iyadoo aan cidna lagu xadgudbeyn, waxaana taasi ay tilmaameysaa in seddex meelood meel leysku raacay ansixinta dastuurka dalka maser.
Dastuurka wadanka Maser, ayaa dhigaya in laba bilood lagu soo dhiso baarlamaanka dalka, iyagoo isla mudadaasna xafiisyada kala wareegaya sii hayayaasha, waxaana wararka ku dhaw madaxweynuhu sheegayaan in la dadajin doono doorashada baarlamaanka.
Dadka siyaasadda falaanqeeya ayaa sheegaya in dalka Maser, uu la daalaa dhacayo siyaasad kala jabsan, taasoo sii hurin doonta dhaqaala xumida laga baqayo in dalka ay ku habsato.
Dowladaha reer galbeedka qaarkodo ayaa taageeray ansixinta dastuurka dalka Maser, laakiin xukuumadda Washington, ayaa ugu baaqday madaxweyne Mursi inuu dalka iyo dadkuba dajiyo.
Maser, ayaa yeelaneysa dastuur aan ansixintiisa loo wada dhameyn oo u muuqda inay ka soo horjeedaan codad badan oo ku dhaw boqlkiiba nus, maadaama afartan boqolkiiba ay mucaaradeen, waxaana wadanku uu dhawaan doortay madaxweyne Mursi.
Bishii Febraayo sanadkii 2011 ayaa la tuuray madaxweynihii hore ee Maser, Maxamed Xusni Mubaarak kadib markii ay ku kaceen dadka reer Maser, waxaana ay u muuqaneysaa inuu taageeradiisii hore waayay madaxweyne Mursi kadib markii uu si islaamnimo leh uu kaga hadlay gumaadka dadka reer Falastiin.
Tags: maqaallo, warar « Qoraalkii HoreTaliska militariga Soomaaliya oo ogaaday xeelado ay kooxda Shabaab ku soo weerari jirtay	Qoraalka Xiga »Dowladda Soomaaliya oo fursadii ugu dambeysay siisay dhallinyarada u dagaallanta Al-shabaab	Halkan Hoose ku Jawaab